Le ndoda kancane nje wangena nenhlalakahle, ukuthi akakabi uyazi, ukufunda mayelana imvelo yakhe: Usana lokuqala ubona unina, ezwa umsindo, azizwa efudumele futhi oziqonda nezinye izimfihlo eziningi yokuzamazama emhlabeni. Njalo ngonyaka kuba nalolo lwati babe ezijulile, nezindlela zocwaningo - iyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho. Ngokungangabazeki, babashayeli kunqubo ezinjalo ukuthola wonke umntwana esekhulile. Eminyakeni yokuqala yokuphila kuyinto - abazali kanye nabantu abavela nesimo esiphuthumayo, futhi njengoba izingane okukhulunywa ngaye, ukudalulwa "izimfihlakalo" emhlabeni umntwana kuwumsebenzi zochwepheshe othisha zasenkulisa kanye nezikhungo yangemva. Kule ndaba, le izinkulisa kufakwe isimiso sokuqeqeshwa kwi nezwe elibazungezile. Iqembu wokulungiselela wanakisisa kulesi sigaba zohlelo. Sizokubonisa ukuthi izici kufanele ucabangele uthisha lapho asebenta nalelicembu yobudala kanye nokuthi bayifeze kanjani imigomo yakho yemfundo.
umhlaba ophila kuwo imigomo umsebenzi
Uma nohlaka olucacile adilivwe futhi imigomo kwadingeka ukuba afeze uthisha emsebenzini wakhe professional, ne ukwethulwa kwe-federal isimo ejwayelekile wokufundisa isimo sesishintshile kuze kube i-alcohol. Namuhla, umsebenzi uthisha - hhayi kangaka oluqondile ezinganeni, indlela ukuthuthukisa abafundi babo umsebenzi engqondweni yethu, ikhono cwaninga, ukuhlaziya, zamagama yolwazi. Ngokulandelana, manje ukuthatha indlela isigaba okudala elalibazungezile eqenjini wokulungiselela. Owazana nemvelo wenziwa ngendlela yokuthi izingane babe abambe iqhaza ngokugcwele "ukutholakala" kwaleli ulwazi olusha.
Sizokwenza ukuchaza isibonelo eklasini zomhlaba ngaphandle ngale ndaba. "Autumn" Uma ngaphambili kwanele ukubonisa izingane ifanekisela leaf kuwa, imvula, usitshele mayelana nezinguquko ezilwaneni nakubantu esiphila kulesi sikhathi sonyaka, kodwa namuhla ngendlela enomphumela umqondo walesi sifundo kuyoba uhambo, phakathi kwesikhathi lapho izingane ngokwabo (beqondiswa neqondayo nguthishela) ziyonquma izinguquko imvelo. Ngokwesibonelo, ukuqoqa ezithelo amaqabunga afile (okuyinto ke ingasetshenziswa ukuhlanganisa ilwazi ku izifundo yobuhle), ngeke ulinganise izinga lokushisa lokushisa emoyeni, ubuka ukuziphatha izinyoni, izinambuzane nokuningi.
Indima umsebenzi emhlabeni ngaphandle eqenjini wokulungiselela
Amakilasi ku elalibazungezile eqenjini wokulungiselela hlala ebalulekile enqubeni yemfundo lonke. Lena akuyona kuphela ukuze engcono ukulungiselela ikusasa lokuqala ibanga ukuze kwemisetjenzana yokuzijamela okungasenani kanye orientation emphakathini esikoleni, kodwa futhi nge amakhono anda ezinganeni ngokwazo. Namuhla, abafundisi amathuba amahle kukhethwa izindlela namasu zokubukwa nabafundi zabo abambe iqhaza ngokugcwele yokufunda.
Amakilasi ku elalibazungezile eqenjini wokulungiselela - anhlobonhlobo ezihlukahlukene ulwazi. Kuzoqalwa nge-iminyaka emithathu, izingane sebeqala ukuba abe nesithakazelo konke okwenzekayo abaseduze kwabo. Yingakho ngalesi yobudala izingane abizwa ngokuthi "Who Knows?". Ukuze abafundi leqembu wokulungiselela yolwazi kwezemvelo imvelo kubalulekile kakhulu. Izingane esezikhulile zingase usunayo ukuthola nokuxazulula izimfihlakalo engaziwa. Umsebenzi kathisha kulesigaba - ukuthuthukisa ilukuluku, umsebenzi engqondweni yethu, ukuthumela izingane okutholakele efanele futhi kufinyelelwe iziphetho ezinembile, ngqo kuhlelembisa inqubo cognition.
Ingabe aphethwe ngezihloko amakilasi ezifana ku elalibazungezile eqenjini wokulungiselela:
Ukujwayelaniswa nge izilwane nezitshalo.
Izinkathi zonyaka, izinyanga, izinsuku zesonto. Isikhathi.
Isikhala elisizungezile. Basic ulwazi ezindawo. Kosmos.
Izinto nenjongo yabo. Lomsebenzi.
Inzwa. Direction. Umumo emkhathini.
Inkampani: enkulisa, umndeni kanye nezwe.
Umcabango "Mina" sakhe.
Labor izinto ezenziwa abantu.
Ukuhlala Nsuku zasenkulisa, umntwana uthola okuthile entsha ezindaweni ezingenhla ubuchwepheshe, nokuhlanganisa ekwandiseni ngaleyondlela ulwazi olukhona wemithwalo mayelana nezwe elibazungezile.
Iqembu wokulungiselela ingakhetfwa ehlukile kunaleyo emaqenjini abasebasha, izindlela namasu. Lokhu kuncoma ihlobene nezici yobudala kwezingane, kanye izimpokophelo imfundo nezinhlelo zemfundo.
Ngesikhatsi sesifundvo zomhlaba emhlabeni abafundi, njengoba besho, abakwazi ukuhlala athule. Ngakho-ke, ngempumelelo kanye fun for izingane kukhona izinhlobo ezinjalo umsebenzi, njengoba uhambo, ukushaywa umoya, travel, cwaningo, ukuhlolwa, umdlalo-isigaba. Njengoba isibonelo, ukuqeqeshwa emhlabeni ngaphandle esihlokweni eqenjini wokulungiselela "Autumn". Ungacabanga "iziteshi", okuyizinto Imininingwane udla futhi izabelo ku into ethize: imvula, amahlamvu ayehla, ukuziphatha izilwane ekwindla, umsebenzi wabantu.
Ulwazi okuholela liyadingeka esikhathini esizayo nsukuzonke ukulungisa hhayi kuphela neminye imisebenzi (isibonelo, enesihloko esithi "Autumn" emisebenzi ku ezobuciko ukupenda leaf noma enze isicelo), kodwa futhi ngokusebenzisa amakhono awusizo (izingane zonke lokushisa air ekuseni ngesilinganiso, gcina Diaries kwezulu njll).
Kumiswa imiqondo emvelweni
Ngaphambi umsebenzi uthisha ukuze bagxilise ezinganeni isimo sengqondo ngokucophelela wemfanelo emmangweni lohlala kuwo kanye izilwane zasendle. Ukuqalisa letinhloso isici esibaluleke kakhulu ukutholakala izincwadi ezidingekayo futhi imishini yezobuchwepheshe leqembu. Ngaphezu impahla methodological, kutuswa kanye izingane ukwakha "endaweni izilwane zasendle". Siyabonga kuye, abafundi ngeke nje nsuku zonke enkulu ukubukela izilwane nokuxuba izitshalo ezithile, ukufunda ukuze amnakekele futhi uvikele, kodwa futhi ukuthuthukisa ikhono lokukhulumisana kanye nokuxhumana eqenjini, ukwakha ubungane nabantu.
Corner of imvelo kwi uhambo
On the uhambo, ungakwazi ukuhlela ukutshala imbali imibhede noma ingadi yemifino, ukwakha eyizidleke sondle izinyoni. Izingane zifundiswa akhululeke ngokwemvelo sibonga lolu hlobo umsebenzi emhlabeni ngaphandle eqenjini wokulungiselela. Owazana ne izimfihlo zendalo Kunenkolelo imikhuba, ukuvumela ingane ikwazi ukuthuthukisa amakhono kanye namakhono abo, self-actualization.
Ngo izinkulisa kunezinhlobo ezahlukene umsebenzi emhlabeni ngaphandle: muntu, futhi phambili eqenjini. Ngokwesibonelo, ukuze bagcine ukuziphatha izinhlanzi aquarium kungaba konke ndawonye futhi sibe obhekene ukuchelela izimbali kuyoba ngelinye ilanga abantu abambalwa kuphela - emsebenzini, ungakwazi bafundise ukusuthisa nengane eyodwa.
Ukuthuthukiswa inkulumo ekilasini ngoba elalibazungezile
Ukuthuthukiswa ilungelo yokukhuluma abanekhono - Inhloso jikelele semfundo enkulisa. Akumelwe sikhohlwe ngalesi sici futhi isigaba izwe elizungezile. Namuhla, sibonga nakwezobuchwepheshe, othisha ngeke kube nzima ukuthola izincwadi izinhlobo ezahlukene futhi yimuphi izihloko ezihlobene.
Amafomu eziyinhloko izinkondlo kanye yezinganekwane. Ngokwesibonelo, amakilasi ku elalibazungezile belungiselela ukuthuthukiswa yokukhuluma nokusetshenziswa ezilula ngekhanda amafomu vesi, lapho izingane ke ukufunda inhliziyo. Futhi-ke, indaba kugaywe ngokushesha, ngokwemvelo futhi unomphela agcinwe. Ifomu ezithakazelisayo imidlalo eselula rhymed noma yaseshashalazini kwemvelo imikhiqizo.
Ekilasini ngoba elalibazungezile lweqembu wokulungiselela kufanele enwetshiwe silulumagama izingane: ukwethula abafundi entsha nemigomo zihlanganisa iziphawulo imisho lemagalagala. Ungaba izingane zichaza isimo noma emhlabeni imbali, kubonakala emgwaqeni, ngesikhathi esifanayo ucele izingane ukusebenzisa amafomu ahlukahlukene kwamagama, imishwana nemisho. Ngokwesibonelo, ukunikeza umdlalo we ibhola: bafundzi beme umbuthano; edlulisa umakhelwane ibhola, ukuphendula umbuzo lo thisha ngalokho namuhla sezulu (libalele, ecacile, liyana, belusizi, epholile, umoya, njalo njalo. d.).
Tebuciko nokuthuthukiswa kwezobuciko
Ngokungangabazeki, ulwazi oluthuthukayo lomhlaba obonakaliswe ukubonakaliswa yobuhle kwezobuciko. Ngaphezu kwalokho, ngakho fixed izifundo langaphambilini ku elalibazungezile eqenjini wokulungiselela. Ukujwayelaniswa ne imidwebo, Appliqué futhi ukumodeliswa thematically senanele nendaba ezuzisayo. Kulokhu, izingane ukuthuthukisa amakhono tebuciko, emihle motor amakhono (okuyinto yena, ngokuqondile ahlobene enkulumweni), ezakhiwe bezibona ngabanye zomhlaba, kukhona iSilekeleli Sokwazisa futhi yokuzibeka ingane.
Naphezu kweqiniso lokuthi GEF is hhayi Kunconywa izingane ukuba afeze umsebenzi zabasebenzi, iningi othisha bayathanda ukuthalalisa ucabanga ukuthi le nqubo yesiyalo, eba nezitimela kanyekanye. Ngempela, ukuchelela izimbali, ingane nje kangaka "wasebenza" emzimbeni, indlela yokunakekela izilwane, ukuze uqaphele ngokwabo e abazisebenzako, ngikutholile iqembu ukukhuthazwa. Kubalulekile kuphela wazi ukuthi imisebenzi ingane kujabulise awuzange ophoqelelwe futhi ngokuqinisekile babengafuni ukuba yokukhalaza emkhuza. Uma uthisha kudinga ingane ukuzwakala kobushiqela baziqoqele, ezifana isinkwa amankeyane, izinzuzo imisebenzi efana kuyoba kancane, noma kunalokho - akukho. Isimo esifanayo zingalungiswa ngendlela ehluke ngokuphelele. Ngokwesibonelo, ukuqhuba ukuqeqeshwa emhlabeni ngaphandle ngosuku olufanayo: "Indlela sikhule kakolweni?"
Amakilasi ku elalibazungezile eqenjini wokulungiselela enkulisa - kuyinqubo creative, uthisha ngamunye ekhetha izindlela ezifanele kanye namasu ukusebenza izingane. Kubalulekile ukunikeza izingane ithuba lokuveza imizwa nemizwelo. Vumela izingane "thinta" ukuze ubunjalo futhi lumphefumulo, kuphela ke kungenzeka ekufezeni izinjongo zabo zemfundo.
Incazelo kanye nokubuyekeza - namanabukeni Molfix
Lapho ungenza pasta izingane? Izincomo ezivela zokudla kanye namathiphu
Indlela yokulungisa amasondo eziyisishiyagalombili ngebhayisekili - incazelo egcwele
Umqeqeshi Mark Ifraimov: biography, izincwadi, izihloko, amalungiselelo kanye nokubuyekezwa
Green ukuzilibazisa endaweni. Forest Green Zone
Ukufuduka kwabantu emhlabeni wonke